Namely An’ireo Nosin’i Pasifika Atsimo ny Rivo-doza Evan
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
Suva, FIDJI—Nisy rivo-doza mahery vaika tany Fidji sy Samoa tamin’ny tapatapaky ny volana Desambra 2012. Ny Rivo-doza Evan no voalaza fa anisan’ny rivo-doza mahery indrindra namely an’i Fidji tato anatin’ny 70 taona. Olona an’arivony no tsy maintsy nafindra toerana ary maro ny foto-drafitrasa simba. Misy milaza fa mitovy ny zavatra simba nandritra ilay tsunami tamin’ny 2009 sy ny zavatra simba tany Samoa.
Tsy nisy maty na naratra ny Vavolombelon’i Jehovah, araka ny tatitra nataon’izy ireo. Nanimba ny tranon’ny Vavolombelona maro anefa ilay rivo-doza. Tranona Vavolombelona 80 mahery no simba na rava, araka ny tatitra voalohany voaray avy tany Fidji. Vavolombelona 47 kosa no tsy maintsy nandao ny fonenany tany amin’ny nosy iray any Samoa, antsoina hoe Upolu.
Napetraka vonjimaika tany amin’ny toerana fivavahana ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah sy tany an-tranon’ny Vavolombelona hafa ny tra-boina tany Samoa. Nitondra fanampiana vonjy rano vaky tany Samoa ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Aostralia. Fiangonana efatra no nizarana sakafo sy zavatra hafa, tamin’ny 18 Desambra, ary natao fakana rano madio ny biraon’ny fandikan-tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nisy Vavolombelona maromaro koa nanamboatra ny trano simba ary nampiasa fitaovana manokana mba hanadiovana an’ireo trano safotry ny rano sy feno fotaka. Vavolombelona miasa an-tsitrapo no anisan’ireo komitin’ny vonjy rano vaky tany Fidji, ary izy ireo no nikarakara an’izay nilain’ireo tra-boina teo no ho eo. Izy ireo koa no mandinika an’izay ilain’ny Vavolombelona manomboka eo satria simban’ilay rivo-doza ny voliny.
Hoy i Tevita Sadole, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Fidji: “Efa lasa ilay rivo-doza nefa mbola betsaka ny zavatra tsy maintsy ataonay. Tsy kivy anefa izahay fa vonona hanampy ny namanay sy ny mpiara-monina aminay foana.”
Fidji: Tevita Sadole, tel. +679 330 4766